Haween agabka hiddaha iyo dhaqanka ka macaashay - WardheerNews
Haween agabka hiddaha iyo dhaqanka ka macaashay
Dhanka bidix Barni Cali Maxamed, Xabibo Axmed Cadow, Xaliimo Barre Osman, Geni Siyaad Xasan/ Axmed Cabdulaahi/Ergo
Konton haween ah oo ku nool xeryaha Dhadhaab oo sameeya alaabaha hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida iyo agab dhaqameed kale oo laga isticmaalo dalka Kenya ayaa dhaqaale fiican oo wax weyn ka taray nolosha qoysaskooda ka soo saara agabkan.
Haweenkan oo shaqadan si wadajir ah u soobillaabay sannadkii hore 2018-kii ayaaagabkan oo ay iibiyaan ka soo xereeyadhaqaale gaaraya bishiiba ugu yaraan $5000.
Safiya Xirsi oo ka mid ah haweenkan oo ku midaysan urur lagu magacaabo Yote Farsamo Group waxaa dhaqaalaha ay hesho ku tiirsan nolosha qoyskeeda oo ka koobansiddeed qof.
Waxay sheegtay in alaabahan ay u iib geeyaan magaalooyinka dalka Kenya oo aadlooga isticmaalo.
Safiyo oo samaynta agabka hidaha iyo dhaqanka baratay intii ay joogtay xeryahaqaxootiga ee Dhadhaab, waxaa fursaddan ka heshay Yoote Farsamo oo tababar siisaysanadkii 2017.
“Masafaha ayaan sameeyaa, dambiilaha ayaan sameeyaa, dermaha waan sameeyaa, sidoo kale dharka waa ranjiyeeyaa, maasha aad baan hadda farsamadaa u fahansannahay waan bartay, maadaama ay waxaan ay waxaan hidaha iyodhaqankayagii ay tahay oo aan samaysan jirnay,” ayay tiri safiyo.
Safiyo ka sokow in samaynta agabkani ay u tahay xirfad ay ka raadiyo nololmaalmeedkeeda dhinaca kale waxay sheegtay in ay qayb tahay shaqadani soonoolaynta hiddii iyo dhaqankii Soomaaliyeed.
Agabka dermaha, dambiilaha, saliyada babisyada, Masafyada, koofiyadaha iyo dharkaaliindiga ahi waxaa uu ay ka mid yihiin agab ay haweenkani ku sameeyaan xaruntoodaoo ku taala Xerada qaxootiga ee Xagardheer.
Haweenka Xirfadlayaasha ah waxaa miradhalka shaqadan ka caawiyay hay’adahasamafalka ee Norwegian Refugee Council NRC iyo International Trade Centre ITC.
Cadar Haajir Cabdi, oo ah guddoomiyaha haweenka sameeya agabkan, waxay RaadiyoErgo u sheegtay in ururkoodu hadda xiriir ganacsi la leeyahay dad badan oo daneeyawaxyaabaha.
“Soomaalida marka ay arakaan aad bay ugu farxaan oo waxaa laga yaabaa xataa qofaan iibsan rabin in uu sali kaa iibsado ama dambiil uu kaa iibsado, Nairobi maalindhoweyd mar aad aad nay oo Peace Pas meel la yiraahdo Bandhig aan u aadnaySoomaali debedaha ka imaadeen baa naga iibsadey saliyo,” ayay tiri Cadar.
Barni Cali Maxamed waa hooyo ka mid ah xirfadlayaasha sameeya agab dhameedkan. Waxay qabashada shaqadan u tahay sida ay Raadiyow Ergo u sheegtay il dhaqaale ooay ka kabto nolosha qoyskeeda oo ka kooban 14 qof.
Barni ayaa lacagta ka soo gasha shaqadan sida ay xustay ku deberta kala bar cuntada quutal daruuriga.
Barni waxay samaynta agabkan baratay iyada oo aad u yar oo markaa joogtay dhulkabaaddiyaha ee gudaha dalka Soomaaliya.
“ Dadka waa jecelyihiin oo waa soo jiidataa, dharka kariska iyo waxyaabahaa aad baa loo jecel yahay, wixii hadda nolol maalmeedka cidiheena aan ku maarayno meeshaanuun baan ka helnaa,,” ayay tiri Barni.
Xigasho: Radi Ergo